Xisbiga Waddani Oo Munaasibad U Qabtay Taageerayaal Ku Soo Biiray Xafiis Cusub-na Ka Furtay Galbeedka London. | Burco Media
Xisbiga Waddani Oo Munaasibad U Qabtay Taageerayaal Ku Soo Biiray Xafiis Cusub-na Ka Furtay Galbeedka London.
October 2, 2013 | Filed under: Latest News | Posted by: farxaan
London(BM)-Xisbiga Mucaaridka ah ee Wadani ayaa Xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo iskugu jirta laba munaasibadood oo kala ah; furitaanka Xafiiska Cusub ee Wadani UK West London xaafadda (Southall), iyo soo dhawaynta wasiirkii here ee Warshadaha xukuumadii Udub Mudane Maxamed Saleebaan Wayne ku qabtay Hoolka xafladaha ee Salaama Restaurant oo ku yaala Southall.
Ugu horayn waxa waxa ka hadlay xidhiidhiyaha guud ee xisbiga Wadani Uk ee barnaamijka daadihinayay. Waxa isaguna hadalo soo dhawayn ah ka jeediyay hogaanka siyaasada xisbiga wadane Najiib. Intaa kadib waxa qaatay Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee Xisbiga wadani UK. C/raxmaan Cabdullahi Amin oo si kal iyo laab ah u soo dhaweeyay wasiirka islamarkaana tilmaamay in xubno miisaan culus lihi ku soo biirayaan xisbiga.Iyada oo 17/08/2013 London ayku soo dhaweeyeen Xildhibaan Ibrahim Jamac Cali (rayte), Maxamed Saleebaan Waynena yahay xubintii labaad ee ay soo dhaweeyaan. Waxa kale oo uu soo dhaweeyay xubnaha cusub ee Wadani ee west London isaga oo tilmaamay in xisbiga wadani yahay Xisbi si dhakhso ah u koraya (Fast Growing party).
Intaa kadib waxa ka hadlay Mubaarak hilaac, oo ka midahaa xubnihii ka hawlgalay soo dhawaynta Wasiirkii hore ee warshadaha Somaliland.
Waxa iyaduna ka hadashay (Gudoomiyaha garabka haweenka) xisbiga wadani Uk Nuura Axmed Naasir
Xafladdan oo aan loo kala hadhin waxa ka hadlay Maxamuud Raage oo aad ugu dheeraaday in cadaalladdu tahay hawbawlaha jiritaanka Somaliland. Xuseen Asad oo ah xubin ka mid ah hogaanka sare ee xisbiga Wadani ayaa aad ugu dheeraday qaabka xukuumaddu u maamushay labadii mashruuc ee waawaynaa ee ugu dambeeyay kuna dhaliialay xukuumadda kartti daro. Maxamed Cali Cabdi oo isna ka mid ah hogaanka sare ee xisbiga ayaa talo u soo jeediyay madaxwennaha in uu ka faaiidaysto waayo aragnimadiisa oo uu dalka sidan u dhaamo. Farduus Hamarshool oo xubin aad u firfircoon oo ka mid ah xisbiga ayaa aad ugu dheeraatay wadada Ceerigaabo xustayna in xisbiga wadani ay sugayso dhismaheedu iyo wadada Saylacba. Xubnahani waxay ku dheeraadeen arimahan hada ka taagan Somaliland ee ay ka mid yihiin maddaarka Hargeysa, Shirkadii Shidaal Baadhista ee ka baxday Somaliland iyo xerka dhawaan la ansixiyay ee Wadooyinka.
Waxa ay tilmaameen in ay taageersanyihiin wixii waxqabad ah laakiin loo baahanyahay in si dhab ah baadhitaan loogu sameeyo arinta Airportka iyaga oo tusaale u soo qaatay lacagta ku baxday Madaarka hargaysa.
Waxa isna ka hadlay, Maxamed Farax (Gud Abaabulka West London) oo sheegay in uu xisbiga ugu shaqayndoono si daacad ah.
Marso Cabdi (Gud Garabka Haweenka West London) oo dhawaan ka soo laabatay Somaliland waxna ka taataabatay wacyiga iyo waayaha ka jira dhulkii hooyo iyo sida xukuumadda kada jirtaa u gabtay masuuliyaddeeda, loona baahanyahay hadii xisbiga wadani ku guulaysto doorashada ahmiyad wayn siin doono Haweenka Somaliland.
Waxa iyaguna ka hadlay xubno badan oo marti sharaf ah oo ay ka mid yihiin Axmed Siciid bootaan, Col. Ahmed Jama, balanqaaday in ay taageero balaadhan siindoonaan xisbiga wadani
Intaa kadib Waxa la wareegay Gudoomiyaha Xisbiga wadani Uk Axmed Cali Naahi oo ku soo gabagabeeyay soo shawaynta gudida xafiiska cusub ee wadani ansixiyayna dhamaan xubnaha cusub ee laanta Southall. Gudoomiyaha West London Wadani Maxamed Wali Abdi iyo Gudoomiye ku xigeenka Amina Bile, oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay xilka cusub hambalyo ,duco iyo dardaaranna loo raaciyay. Gudoomiyuhu wuxu tilmaamay in xisbiga Wadani yahay xisbiga ugu xafiisyada badan xisbiyada Somaliland UK dhexdeeda, islamarkaana uu yahay xisbi ay u dhanyihiin reer Somalilan
Ugu danbayna Gudooye Axmed Cali Naahi wuxu si heersare ah ugu soo dhaweeyay Wasiirkii hore ee warshadaha Somaliland xiligii UDUB, mudane Maxamed Saleebaan Wayne oo madasha ka soo jeediyay hadalo qiiro leh, waxa hadaladiisa ka mid ahaa, In aan si cilmiyaysan loo maamulin arintii shidaalka. Xukuumadana ku dhaliilay sadexda arimood ee ugu dambeeyay. Mudane Maxamed Salebaan Wayne wuxu sheegay in uu dhawaan u bixi doono Smaliland Xisbiga Wadanina siin doono taageero balaadhan oo xag waaya aragnimo, xag aqooneed iyo muruq iyo maalba u huridoono hadii Allah yidhaado.
Xubnahani waa qayb ka mid ah Gudiga Xisbiga Waddani Laantiisa West London.
1) Mohamed Wali Cabdi – Gudoomiye
2) Amina ibrahin bile – Gud/xigeen
3) Cumar ali ibrahin – Paratakoolka
4) Axmed ibrahin bile
5) Hibo Marso cabdi – Gud/garabka haweenka
6) Ifraax ducaale – Khasnaji
7) Cabdi yusuf ismaaciil – Gud/Xigeenka Dhalinyarada
8) Nuur A/dahir kahiye
9) Maxamed farax xasan – Gud/Abaabulka
10) C/samad Cismaan Batrool – Gud/Dhalinyarada
11) Abdulqadir ismail elmi – Xubin
12) Fatxiya Jama Dalal
13) Liban Haybe Gashancade
14) A/nasir Abdi Siciid